Ungasusa njani isikhumba esilungileyo - Ukucoca Iitips
Ekhethekileyo Okuzenzekelayo Uboya
Ungasusa njani isikhumba esilungileyo
Ukusuka kunyango olwenziwe ekhaya ukuya kwiimveliso zorhwebo, zininzi iindlela zokuphumelela ukususwa kwephunga. Funda ukuba ungasusa njani ivumba lokungunda kwikhaya lakho, iimpahla, iimoto, izidlo, ukutya, nokunye okuninzi.
I-Mildew yinto ephilayo ekhula naphina, okoko nje kukho izinto eziphilayo kwaye ezi meko zilandelayo ziyafezekiswa:
ubudlelwane imibuzo ukubuza isoka lakho
Isicoci seBissell Steam
Iingcebiso zokucoca iGrill
Izinto ezenziwa ngamachiza zibangela ivumba lomngundo elikhulayo eli likhulayo njengoko lisasazeka kwindawo yalo yokutya. Izinto zendalo ezityiwa sisikhunta kubandakanya amalaphu endalo, iinkuni, iphepha kunye nesikhumba. Ke ngoko, inokubambelela ngokulula kwimpahla yakho, kwindawo yokuhlamba iimpahla, kwizihlalo zeemoto, kunye nokutya okutyibilika njengesilika. Kuba uyazi unobangela, lixesha lokuba uyiphelise ngeendlela ezimbalwa zendalo.
Ungasusa njani i-Mildew Amavumba endlwini
Utsholongwane okhula kwigumbi elingaphantsi elifumileyo kunye namagumbi okuhlambela zizinto eziqhelekileyo ezibangela ii-odolo ze-musty. Nangona kunjalo, zininzi ezinye iindawo ekhayeni apho ukungunda kungakhula kukhokelele kwivumba elingathandekiyo eligcwele umoya. Iphunga lomdaka lingavela kwiindawo ezininzi eziqhelekileyo, kubandakanya:
Ngaphantsi kweebhodi ezisezantsi
Kwiisinki zokuhambisa amanzi
Ukuhlamba iimpahla kuyaphazamisa
Impahla yokuhlamba esele ishiye imanzi okanye yomile kancinci
Ke ngoko, ngaphambi kokuba ulahle ivumba lokungunda, kufuneka ufumane umthombo kwaye usebenziseIsikhuhlisi siyasusa isikhuni. Nangona kunjalo, xa kufikwa kwindawo yokuhlamba iimpahla, izidlo, kunye nemoto, zikho iindlela ezimbalwa onokuzama ngazo.
Ungawufumana njani umngundo wevumba kwindawo yokuhlamba impahla
Ukuba ukhe wemka ngempazamoimpahla yakhokwindawo yokuwasha, uyazi ukuba ivumba elimnandi Kwaye kubonakala ngathi ukuvuselelwa kwakhona akukufumani la mavumba kwiitawuli zakho. Ukuphelisa ivumba elimnyama kufuneka:
Iqela lamaMyuli ama-20 iBorax
Emva kokubamba i-Borax, yongeza ikomityi enye kwindawo yakho yokuhlamba kwaye uhlambe umthwalo njengesiqhelo.
Uyenza njani i-inki yomnyama
Ukususa i-Mildew amavumba kwiingubo
Iitawuli kunye neelaphu zokuhlamba ziyinto enye, kodwa ukuba iimpahla zomntwana wakho ziye zishiyeke kongezwe ixesha elide, zinokuvelisa neli phunga loyikekayo. Umngundo ufuna nje ukufuma kunye neemeko ezinomswakama ukuze uphumelele, kwaye umqobo kulutsha ulungile. Ukufumana ivumba le-musty kwiingubo, bamba oku kulandelayo:
Ngeviniga yakho emhlophe esandleni, sebenzisa iimpahla kumjikelo wamanzi abandayo wokuhlamba ngamanzi ngekomityi enye yeviniga emhlophe.
ngowuphi umnwe wakho
Sukongeza nasiphi na isepha yokuhlamba impahla.
Nje ukuba umjikelo wokuhlanjululwa ugqityiwe, hlamba iimpahla njengoko ubuqhele ukwenza.
Ungawususa njani umngundo kwiLitye eliluncuthu
Ukuba unomthwalo wezidliva ezihlaselwe ngumoya, sukukhathazeka. Endaweni yoko, kuyakufuneka udibanise iikhabhathi zakho ze:
Isoda yokubhaka(Ingalo kunye nehammer kuyacetyiswa)
Gcwalisa isinki yakho okanye ibhakethi ngamanzi apholileyo.
Yongeza icephe lesicocisi esincinci kunye neepunipoyi ezimbini zesoda yokubhaka.
Vumela izidlo ukuba zidibanise malunga neyure okanye njalo.
Geza njengesiqhelo kwaye womile.
Ungawufumana njani umngundo kwiMoto
Ngaba ushiye ifestile ezantsi emotweni yakho kwaza kwana? Ngoku, unaso isikhunta sevumba. Ngombulelo, sisisombululo esilula, kodwa uya kudinga:
Emanzi / eyomileyo vac
kuthetha ukuthini ukuba goth
Ngezixhobo zakho ezandleni zakho, sebenzisa i-hairdryer okanye i-wet / vac vac eyomileyo ukususa amanzi kunye nokomisa iikhaphethi kunye nezihlalo zakho.
Xa usomile, ufefe i-baking soda kwindawo ukuze ususe nayiphi na iphunga elimnandi.
Lindela iiyure ezimbalwa kwaye uyikhuphe.
Indlela yokuLahla i-Musty inuka kwigumbi elingaphantsi
Umgangatho ongaphantsi komhlaba yenye indawo yokuzalela yevumba elimnyama, ngakumbi ukuba aligqitywanga. Ngoba? Kungenxa yokuba izindlu ezingaphantsi zihlala zifumile. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba ulisuse ivumba ngokusisigxina, kufuneka ufumane umthombo okanye imithombo kwaye uyicoce. Iviniga okanye i-peroxide lukhetho olukhulu ekususeni ukungunda kunye nokungunda. Uya kufuna kwakhona:
Susa iibhokisi ezinesondo okanye impahla emanzi.
Pakisha izinto, ezinje ngemihombiso yeKrisimesi, kwizikhongozeli zeplastiki ezingangeni moya.
Coca okanye ulahle ifanitshala ngexoshomba.
Nje ukuba uyijongile yonke loo nto, lixesha lokususa ivumba.
Gcwalisa izitya ngesoda yokubhaka.
Zibeke zijikeleze igumbi ukuze zifunxe ivumba lomoya.
Ukususwa kweMphunga eMnyama
Ukuba awuyi kwindlela yokulungisa ikhaya, baninzi abacoci bezorhwebo abafumanekayo.
Inkqubo yoLawulo lwe-MDG ye-Mildew Iyasebenza iinyanga ezintathu kwaye ishenxisa ngokupheleleyo ivumba lomngundo kwindawo engama-400 eenyawo zenyawo. Ezi ngxowa zokuhombisa zenzelwe ukuxhoma okanye ukuphakama njengoko zikhupha igesi ekhuseleke ngokupheleleyo ebantwini nakwizilwanyana zasekhaya.
FG 300 Umngundo kunye noMngundo Blocker ngo Ukulahla ukufuma Inc. isebenza ngokwenza umaleko wokhuselo othintela ukungunda ukuba kunganyuki nokukhula. Iimveliso ezongezelelweyo zokususa ukungunda kuMdaka weRamp zibandakanya:
Hi-Capacity Ukufuma Absorber
Ukuphinda kufakwe kwakhona ukufuma
Yenzelwe oomatshini bokuhlamba ngaphambili, Ifomula yeWherry yeWherry Washer Formula isusa ivumba lokungunda kwiitawuli, iimpahla kunye nomatshini wokuhlamba uqobo. Umngundo kunye nesikhunta sakha ngaphakathi ngaphambili kulayishwa oomatshini bokuhlamba yingxaki eqhelekileyo ngenxa yoyilo lwewasher. Ifomula ye-Odor ye-Smelly Washer yeFomula iyabola, ayinetyhefu, kwaye ine-PH engathathi hlangothi.
ukubamba njani iimpukane endlwini yakho
Iingcebiso zokususa i-Mildew Odor
Xa kuziwa kukuvumba okuqhelekileyo kwesi sifo, nika ezi ngcebiso ukuzama ukuwususa.
Ungaze ubeke iimpahla zokuhlamba ezimanzi okanye iitawuli kwindawo yokuhlamba iimpahla.
Sebenzisa igumbi lokutshiza okanye ukutshisa amakhandlela anevumba elifihliweyo ukufihla ivumba lomngxunya okwethutyana.
Ngamaxesha athile umoya ophuma ngaphandle wokugcina kunye nezinye iindawo ezivaliweyo.
Ukuba ufumana ukukhula okubanzi kokubumba naphi na ekhayeni lakho, tsalela iingcali. Ezinye izibumba zinetyhefu kwaye kufuneka zisuswe ngokufanelekileyo.
Ukususa ivumba elimdaka ekhayeni lakho
Nangona ukususwa kwexhala kungasusa ivumba elingathandekiyo, kubalulekile ukususa ukungunda okubangela ukuba iphunga lithintele ukuba lingabuyi. Nje ukuba uyilungise, iindlela ezininzi ziyafumaneka ukuze zive ivumba elilungileyo.
I-Inshorensi Yempilo San Francisco Iihotele Malunga Mortgages Khuphela Music Enye Indlela Fuel
I-Nail Care Nokuyilwa Kweempawu
Abadlali Bomculo Mp3
Iingxaki zothando loLutsha olu-15 ngokumangalisayo
Uncedo lweKrisimesi lokuKhanya kwiXesha: Isikhokelo kuNcedo lweSisa
IKharityhulam yoLawulo loMsindo
Iifoto ezi-28 zekhekhe lokuSana ezizokuKhuthaza
Umbona ogcadiweyo kwi-Cob
ndinganxiba iblukhwe emnyama emtshatweni
iwotshi yamadoda enamaqela amade ongezelelweyo
ungasusa njani ibala lamanzi elinzima kwindlu yangasese
bangaphi abantu abaxhatshazwayo minyaka le
yintoni onokuyidibanisa ne-amaretto ciroc
Amatikiti And Discounts
Abadala Imiboniso Yesilayidi
Ukwaluphala E Empilo